RIKOODH: Lionel Messi Oo Dhigay Rikoodh Abid Aan Ka Dhicin LaLiga Qaybta Hore Ee Ciyaarta Real Valladolid - Gool24.Net
RIKOODH: Lionel Messi Oo Dhigay Rikoodh Abid Aan Ka Dhicin LaLiga Qaybta Hore Ee Ciyaarta Real Valladolid
Xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi ayaa rikoodh aan abid ka dhigin horyaalka waddanka Spain ee LaLiga loogu diiwaangeliyey kulanka ay kooxdiisu martida ugu noqotay Real Valladolid, kaddib markii uu caawiye ka noqday goolka ay kooxdiisu dhalisay qaybta hore.
Messi oo ay da’diisu tahay 33 jir ayaa kubbad uu dhigay, waxa gool u beddelay Arturo Vidal daqiiqaddii 15aad, waxaana caawintaas uu ku dhigay rikoodh aan hore looga diiwaangelin horyaalka LaLiga.
Caawintan ayaa ahayd middii 20aad ee xili ciyaareedkan uu Lionel Messi ka sameeyo horyaalka LaLiga, waxaanu noqday xiddigii ugu horreeyey ee ka ciyaara horyaalkaas ee sameeya 20 caawimood, sidoo kalena dhaliya in ka badan 20 gool.
Lionel Messi waxa uu caawintiisa ku barbarreeyey rikoodhkii gool-caawinta ee Xavi Hernandez uu sameeyey xili-ciyaareedkii 2008/09 oo ahaa 20, laakiin waxa uu Messi dheer yahay, inuu noqday ciyaartoyga kaliya ee abid Spain ka dhaliya 20 gool iyo ka badan, isla markaana 20 gool caawiyey.
Rikoodhkan waxay wadaagaan xiddigii reer France ee Theirry Henry oo horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League xili ciyaareedkii 2002/03 ka dhaliyey 24 gool, sidoo kalena 20 gool caawiye ka noqday, waxaanay ahayd fasal ciyaareedkii ay Gunners horyaalka ku guuleysatay.
Lionel Messi ayaa fursad u haysta in kulamada ka hadhay horyaalka LaLiga ee xili ciyaareedkan uu sii kordhisto goolasha iyo caawintaba, iyadoo uu hore u noqday laacibkii ugu goolasha badnaa abid horyaalka waddanka Spain ee LaLiga oo uu ka dhaliyey in ka badan 630 gool.